အနှစ်နှစ်ဆယ် … လွန်ခဲ့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်…
နောင်တစ်ချိ်န်မှာ နာမည်ကျော် အချစ်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ မထင်မရှား သောက်ညင်ကတ်များသော ဒီတိုနေတာလောင်းလျာ ဖြစ်လာမည့် လူငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် အိပ်မပျော်တပျော် လူးလိမ့်နေတဲ့ နွေညတစ်ည..
မနက်ဖြန် ကောင်လေးရဲ့ ရှင်ပြုရဟန်းခံပြုမယ့်နေ့ဖြစ်လေတော့….ခုနှစ်တန်းအောင်စ သူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့..
ကောင်လေးတို့အိပ်ရတဲ့ပုံစံက တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ ..
ကောင်လေးက သူငယ်ငယ်ထဲက ထိန်းကျောင်းလာခဲ့တဲ့အမကြီးတစ်ယောက်နဲ့အတူတူအိပ်ရတယ် ..အဲဒီအမကြီးက ကောင်လေးမိဘများရဲ့တပည့်တစ်ဦးရဲ့ သမီးတစ်ယောက်ပါ….ချစ်ခင်သံယောဇဉ်တွေကြောင့် အိမ်အကူမဟုတ်ဘဲ အိမ်မှာလာနေဖြစ်ခဲ့တယ်……ကောင်လေးငယ်ငယ်ထဲကပါ…သူ့ကို သူငယ်တန်းထဲက ထိန်းကျောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့….
နာမည်က မမစိမ်း တဲ့ (တကယ့်နာမည်နဲ့ သံတူကြောင်းကွဲပါ).
အဲလိုနဲ့….ကောင်လေးအရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်….ဟိုဟိုဒီဒီ ဗဟုသုတလေးတွေ တိုးပွားလာခဲ့တယ်….
အဲ့ဒီ ရှင်ပြုမတိုင်မီ ရက်ထဲကစပြီး ကောင်လေး အတတ်ဆန်းလာတယ်…
အတူတူအိပ်ရင်း မနက်နိုးလို့ မမစိမ်းထရင် ထမိန်ကျွတ်ကျွတ်သွားတတ်တာ. ဖင်ပေါ်သွားတတ်တာ ကောင်လေး တွေ့တွေ့နေခဲ့တယ်…
အရွယ်ရော ဟိုမုန်းတွေရောင် ပြောင်းလဲခါစ လူပျိုပေါက်တစ်ယောက်အတွက် စိတ်တွေမတည်မငြိမ် ဖြစ်လာတတ်တာ ခဏခဏပေါ့ဗျာ…
အစကတော့ မမစိမ်း အိပ်နေရင်း ပေါင်ပေါ်နေတတ်တာ. ထမိန်လျောကျလို့ ဖင်ပေါ်သွားတတ်တာ ဘာမှမသိခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း အာရုံတွေပြားစေခဲ့တယ်..
နောက်ညတွေကစပြီး တတိတိနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် စံမံကိန်းဗျုဟာတွေပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်… မမစိမ်းအိပ်လောက်တဲ့အချိန်ကို သေချာလေ့လာထားတယ်…၅ရက် တစ်ပါတ်အထိ စောင့်ကြည့်ထားပြီးမှ မမစိမ်းအိပ်ရင် တရေးမနိုးတတ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်…
ကောင်လေးမှာ ကစားရင်းနဲ့ပြဲထားတဲ့ ပေါက်နေတဲ့ ပုဆိုးအဟောင်းလေးတစ်ထည်ရှိတယ်…အဲ့ပုဆိုးပေါက်လေးကျယ်လာရင်း ကောင်လေးရဲ့ ဂျိုးဂျိုး နေရာလေးနဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေခဲ့တယ်..အဲ့ပုဆိုးပေါက်လေးကို အိပ်ခါနီးမှ ကပ်လဲပြီး ကောင်လေး ညသန်းခေါင်ထိစောင်နေခဲ့တယ်…မမစိမ်းကလည်း ဒီနေ့မှ မျက်နှာချင်းဆိုင် လာအိပ်နေတယ်…တောက်…
ဟော…လှည့်ပါပြီ…လှည့်ပါပြီ…မမစိမ်း ဟိုဘက်လှည့်သွားပြီ…ကျောခိုင်းအိပ်ရင်း မမစိမ်းကွေးကွေးလေး အိပ်နေလေရဲ့..
ကောင်လေး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မမစိမ်းဘက်ကိုတိုးတယ်…တိုးတယ်…ကပ်ရင်းကပ်ရင်း မမစိမ်းနဲ့ထိသွားပါပြီ…
ကောင်လေး ငယ်သလောက် မသေးရှာတော့တဲ့ ဂျိုးဂျိုးလေးကို ပုဆိုးပေါက်ထဲက ထုတ်လိုက်တယ်…တန်းလန်းလေးထွက်လာပါရော….
ပြီးတော့ မမစိမ်းကို အိပ်နေရင်းယောင်သလိုနဲ့ ခွလိုက်တယ်….ဖက်ခေါင်းအုံးလိုပေါ့နော်..
အား….အိနေတာပဲ…အိနေတာပဲ…ကောင်လေးထောက်တယ်…ဖိတယ်…မမစိမ်းရဲ့တင်သားကျစ်ကျစ်တွေကိုပေါ့….ကောင်လေးလည်း မာထန်တောင့်တင်းနေတဲ့ ဂျိုးဂျိုးလေးလည်း ဂျိုးဂျိုးကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်…..
အဲ့…မမစိမ်းအကြောင်းကျန်ခဲ့တယ်…မမစိမ်းက အသားညိုညို အရပ်မြင့်မြင့် ဆံပင်ရှည်ရှည် ခါးရှည်ရှည်နဲ့ တောင့်တင်းကျစ်လစ်တဲ့ တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းထွားထွားကြီးနေတဲ့ မမတစ်ယောက်ပေါ့နော်…..ငယ်သူအိမ်မက်ထဲမှာတေ့ာ စွဲမက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ….
မမစိမ်းကိုထောက်ရင်း အိနေတဲ့ အရသာ ကောင်လေး ဒီအရွယ်ထိ မမေ့ခဲ့ပါဘူး….
ကြောက်လည်းကြောက် အရသာလည်းရှိ….ရင်လည်းခုန်နေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် လောဘမကြီးခဲ့ပါဘူး….မနက်ဖြန် မနက်ဖြန် ညတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်လေ….
မနက်ဖြန်ညကျရင်တော့ ခုထက်ပိုတမျိုးများ ဘယ်လိုပျိုးရမလဲ ကောင်လေးပြင်ဆင်ရင်း…နောက်တစ်ညအတွက် ဇာတ်လမ်းဆက်ခဲ့တယ်….
ဒီတိုနေတာ စွန့်စားခန်းများ (အပိုင်း-၂)
နောက်တစ်ရက်.. ကောင်လေး ဒီလိုပဲအခွင့်အခါကောင်းကိုစောင့်နေတယ်.. မိုးလည်းချုပ်ပြီ ညလည်းရောက်ပြီ… အိပ်ရာဝင်ချိန်လည်းရောက်ခဲ့ပါသည်။
မမစိမ်းလည်း အိပ်ရာဝင်…ကောင်လေးလည်း ဟိုလှည့်ဒီလှည်နဲ့ အိပ်ရာဝင်ပေါ့..
မနက် ၁နာရီကျော်…၁နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့ မမစိမ်းအိပ်တာသေချာပါပြီ။။။
ကောင်လေးက ဒီနေ့ည နည်းနည်းအတင့်ရဲနေတယ်…မနေ့ညက အနှောင့်အယှက်မရှိထောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့….
မမစိမ်းက ဂွမ်းကတ်စောင်ချုံပြီး အိပ်တယ်….ဒီတခါ ဘေးစောင်းလေးဗျာ…ကောင်လေးဘက်ကိုလှည့်နေရှာတယ်…
ကောင်လေးက စောင်အောက်ကိုအသာလေးလက်ရှိုထည့်ပြီးဝင်သွားတယ်….ဘယ်ကိုရောက်လို့ရောက်နေမှန်းမသိ…လက်ကလေးကတော့လမ်းလျှောက်နေရှာတယ်…မမစိမ်းက ညအိပ်ကို သာမာန်ထမိန် အဟောင်းပါးပါးလေးဝတ်ထားတယ်…..
ပေါင်ကိုစမ်းမိတယ်…သေချာတယ် ..အဲဒါပေါင်တွေပါ….မမစိမ်းရဲ့ သွယ်လျတဲ့ပေါင်တံတွေပါ…ကောင်လေးရင်တွေတအားခုန်နေပါပြီ….
ပေါင်နှစ်ခုက စိနေတယ်….ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့…စမ်းစမ်းစမ်းစမ်းနဲ့လက်ကလေး အပေါ်တက်လာတယ်…..တဖွဖွနဲ့ပဲ တအားမထိရဲခဲ့ပါဘူး….
မမစိမ်းရဲ့ ပေါင်နှစ်ခု ဆုံမှတ်ကိုရောက်လာတယ်…လက်ကအလိုလိုသိပါတယ်….ဒါ ဟှဝါ ဆိုတာကိုပေါ့…..
ထမိန်လေးအပေါ်က နည်းနည်းပွတ်ကြည့်တယ်….ဟိုက်ရှလဘတ်….တယ် အိပါလား…..
ကိုင်လို့ကောင်းသလိုလို အရသာရှိသလိုလို တမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်….ဒါတောင် ထမိန်ပေါ်က ကိုင်မိတာပဲရှိပါသေးလား..
ကောင်လေးက လက်ကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ထပ်မြှင့်လိုက်တယ်….ဘယ်နေရာက အဓိကလဲဆိုတာ အဲ့အရွယ်ထဲက သိနေခဲ့ပါတယ်….တကယ့်နေရာကို နောက်မှသွားမယ်ပေါ့နော်….ငယ်ငယ်က သင်ရတဲ့ ကြံကိုအရင်းကနေစုပ်သလိုမျိုးပေါ့..
လက်ကအပေါ်ကိုရောက်သွားတော့ကာ…. ခုံးခုံးမို့မို့လေးနဲ့ ပျော့အိအိ ဆီးခုံကို စမ်းမိတယ်..
အဲလိုစမ်းတဲ့နေရာမှာ ကောင်လေးက လက်ကို ထမိန်အပေါ်ကစမ်းနေရပေမယ့် ထမိန်ပြန်ဖုံးတဲ့အောက်ကနေ စမ်းရကောင်းမှန်း ဒီအရွယ်ထဲက သိခဲ့တယ်…ဟီးဟီး..
ဆီးခုံဆိုလို့ သူကတမျိုးပဲလို့တောင်တွေးနေမိတယ်…မမစိမ်းက အသက် အစိတ်ကျော် ၂၆ နှစ်လောက် ဖြစ်နေပေမယ့် ဘာလို့ဆီးခုံးသေးနေမှန်း ကောင်လေး နားမလည်ခဲ့ရှာပါဘူး…
ဆီးခုံအပေါ်ကနေစမ်းမိတော့ ကလေးဆံပင်ပေါက်လေးလို ငုတ်စိငုတ်စိလို စူးစူးစူးစူးနဲ့ မွှေးနုလေးတွေကို ပွတ်နေကြည့်ခဲ့တယ်…
ဒီနေရာမှာ အမွှေးပေါက်တတ်မှန်း ကောင်းလေးသိပါတယ်လေ….
ဒါပေမယ့် ကောင်လေးမြင်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းတွေထဲက မိန်းမတွေမှာ မွှေးထူကြီးတွေပဲ မြင်ဖူးခဲ့တာဆိုတော့ ဒီလိုမွှေးညင်းနုတိုတို စူးစူးလေးတွေကို ထူးဆန်းနေခဲ့တယ်….
ရုတ်တရက်…..လှပ်ခနဲ့ လန့်သွားမိသလို သည်းခြေမခိုင်လေတော့ စမ်းလက်စလက်ကို ပြန်ရုတ်ထားလိုက်တယ်….
ရင်ထဲမှာ ပူလောင်နေတာကြီးကို ခဏထိန်းဖို့ နားတာပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် .အဲ့အရွယ်တုန်းကတော့ ဘာလို့ရပ်မိမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး….
ခဏနားလိုက်ပြီး…လက်ကို ဂွမ်းကတ်စောင်ထဲ အသာပြန်လျှိုထည့်ပါတယ်….ပြီးတော့ နေရာသိပြီးသားကိုအရောက်ပြန်သွားပြီး ဒီတစ်ခါတော့ ချက်ကောင်းကို စစမ်းပါတော့တယ်…
ဟား..ဟား…..မိပြီ မိပြီ…….မိသွားပါတယ် ခမျာ…
ဟိုဘက်တစ်ဖတ် ဒီဘက်တစ်ဖတ်နဲ့ အသားနုလေး….တစ်ဖတ်ချင်းဆီကို စမ်းတယ်..ဟိုဘက်စမ်းလိုက် ဒီဘက်စမ်းလိုက်…အပေါ်တက်လာရင် ထွတ်ထွတ်လေးကို ထိမိပြန်ပါတယ်…..ဟာ…ဘာတဲ့တုန်း…အဲဒါက ဘာတဲ့တုန်း…
လက်က တုန်ယင်လြာ့ပီး စက်ဘီးစီးသင်စ ချာတိတ်တစ်ယောက်လို ယိမ်းလိုက် စောင်းလိုက်နဲ့ သိပ်မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး…..
အထွတ်လေးကို စမ်းတာ ချော်ပြီး အပေါ်ဆီးခုံပြန်ရောက်သွားလိုက်…..အောက်ပြန်ချလိုက်တာနဲ့ အထွတ်လေးကို ကျော်သွားလိုက်နဲ့ လည်နေခဲ့ပါတယ်…
လက်တုန်ခြေတုန်တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီး ခုတခါထိမိသွားတာတော့ အလယ်က ချိုင့်ချိုင့်လေးထဲကိုပါပဲ..
ခုနစမ်းတုန်းက ဒီနေရာ ကျော်သွားမိတယ်ထင်ပါတယ်….အဲဒီ ချိုင့်ချိုင့်ကလည်း ကိုင်လို့ကောင်းသားပဲ ….
ကောင်လေးကြိုက်ပါတယ်…အဲနားတစ်ဝိုက် ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် ကိုင်လို့ကောင်းနေတာ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်….
ကောင်လေးက ဘယ်လိုစမ်းလဲဆိုတော့ကာ လက်ညိုးရယ် လက်ခလယ်ရယ်ကို ပူးထားပြီး ထိထိပြီးစမ်းပါတယ်….
အကုန်နုနေပါလားနော်…အကုန်ကိုင်ချင် စမ်းချင်စရာဖြစ်နေတာ နားမလည်မိတော့ပါဘူး မမစိမ်းရယ်…..
မမစိမ်းရဲ့ ထမိန်အောက် ပေါင်ခွကြားထဲ ဆီးခုံသေးသေး မွှေးနုနုလေးရယ်၊ ဟိုဘက်တစ်ဖတ် ဒီဘက်တစ်ဖတ်လေးရယ်၊ ထွတ်ထွတ်လေးရယ်၊အလယ်က ဘာမှန်းမသိပဲ ချိုင့်နေတဲ့ ချိုင့်ချိုင့်လေးရယ်ကို မျက်နှာမလိုက်ပဲ တစ်လှည့်စီ စမ်းနေပါတော့တယ်…
စမ်းတာ နည်းနည်းကြာသွားပါပြီ .။.. ကောင်လေးလည်း လက်တွေညောင်း တောင့်ထားလို့ ခြေထောက်တွေတောင် အိပ်နေလျက်နဲ့ ညောင်းနေပါပြီ…
ကောင်လေးငိုက်နေပြီ …ခဏလောက်အိပ်မှဖြစ်တော့မှာမို့ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်ထုတ်ရင်း အားမွေးဖို့ ကောင်လေးအိပ်သွားပါတော့တယ်…..
ကောင်လေးတစ်ရေးနိုးလာခဲ့တယ်……စိတ်မှမဖြောင့်ပဲကိုး….မမစိမ်းဘက်ကို စောင်းကြည့်လိုက်တယ်….ဟဲဟဲ…မမစိမ်း အိပ်ပျော်နေတာ သိုးလို့ပါလား…
အယ်….ဒီတစ်ခါ မမစိမ်းအိပ်နေတာ တစ်မျိုးပဲ…မှောက်ရက်ကြီးအိပ်နေတယ်ကြည့်စမ်း…ကောင်လေးဘယ်လိုလုပ်ရပါ့…ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် တွေထုတ်ရတယ်…ထုတ်ရမယ်….
ခုက မှောက်ရက်ကြီး….အဲချိန်မှာ မနက်ထလို့ မမစိမ်းပေါ်သွားတဲ့ ဖင်တုံးညိုညိုကြီးမျက်စိထဲသွားမြင်တယ်……
ကဗျာလေးတောင်ရှိသေးတယ်လေ…အရှေ့ကိုစမ်းပါလို့ အနောက်ကိုတဲ့ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားပဲ….
လက်ကလေးက တောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့ ဂွမ်းကတ်စောင်ထဲပြန်ဝင်တယ်….
ဒီတစ်ခါတော့ မမစိမ်း တင်ပဆုံ ဖင်တုံးအိကြီးဆီကိုပေါ့ခမျာ….
အရင် စမ်းသလို လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးပြီး စမ်းသလိုမျိုး မဟုတ်တော့ပဲ လက်ဝါးလေးနဲ့ပဲ အုပ်ပြီး အရင်တင်လိုက်တယ်…
မမစိမ်းတင်ပါးကြီးကို ကိုင်တယ်….ပွတ်တယ် …ဖိချတယ်…..ဒါပေမယ့် မညှစ်ရဲခဲ့ပါဘူး…နိုးသွားမလားဆိုတာ ကောင်လေးကြောက်တယ်လေ…
ဟိုဘက်ဖင် ဒီဘက်ဖင် လက်ဝါးလေးကိုတင် …ကောင်လေးလက်အရသာခံနေပါတော့တယ်…ထူးဆန်းတယ်နော်….လက်ကလည်းအရသာကိုသိတယ်နော်…ဘာမှတ်တုန်း သယ်ရင်းတို့ရေ…..ကိုင်လို့ကောင်းတာလည်း မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲလေ………
ဒီညအတွက်တော့ အစာပိတ်လေး နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်…ကောင်လေး အရဲစွန့်လိုက်ပါတယ်….
မမစိမ်းကို ခရေကို လက်ညှိုးထည့်လိုက်တယ်….ဟိ…ကြားလေးထဲက ထမိန်ခံပြီး လက်တစ်ဆစ်လောက် ဝင်သွားတယ်…ကြည့်စမ်း…အပေါက်ထဲတော့ မမိလိုက်ပါဘူး…
ကောင်လေး လန့်လိုက်တာလေ…တအားကြောက်သွားတာပဲ….ဖေဖေ မေမေတို့ကို တိုင်လိုက်ရင် သွားပြီလေ…..
ရပ်လိုက်တော့တယ်…..တော်ပြီ…ကြောက်ရတာနဲ့ ခုနက အရသာလေးတွေတောင် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပြီ…နောက်ည တွေကျန်သေးတယ်ဆိုပြီး စိတ်ရှည်တဲ့ကောင်လေး စိတ်လျှော့ မောဟိုက်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြစ်ကင်းကလေးငယ်လေးလို ပြန်အိပ်သွားပါတော့တယ်….(ခွိခွိ)
(မနက်ဖြန်ညမှာတေ့ာ ကောင်လေးအတွက် အထွတ်အထ်ိပ်ရောက်ဆုံးညဆိုတာ ..ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ တစ်သက်လုံးဝေခွဲမရတာတွေပေးခဲ့တဲ့ညဆိုတာ …မမြင်ဖူးမကိုင်ဖူးတာ ကိုင်ရတော့မယ် သိရတော့မယ့်ညဆိုတာ ကောင်လေးမသိခဲ့ပါဘူး…..ကောင်လေး ဇာတ်လမ်းအစက ပြောခဲ့တဲ့ ကိုရင်ဝတ်ဖို့ မတိုင်ခင် ညဆိုတာ .မနက်ဖြန်ညမှအစစ်လေ….အခုကတော့ ဇာတ်လမ်းအစကပြန်စခဲ့တာပါ…နောင်ကြီးလာမှသိလာတာက ဒါကလည်း ကိုရင်ဝတ်ခါနီးတို့ ဘာတို့ဆိုရင် အဖျက်သဘောမျိုးပေါ်တတ်တာ…ဖြစ်တတ်တမျိုးဆိုတာလေ..အဖျက်ပေမယ့် အရသာရှိတဲ့အဖျက်ဆိုတော့လည်း ဟီးဟီး….ကောင်လေးမရှောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး သူငယ်ချင်းတို့ရယ်)
ဂနေ့…ကောင်လေးဘဝအတွက် မွတ်သိပ်စရာ အထွတ်အထိပ် ဇာတ်လမ်း ..
သူအစောဆုံးက ပြောပြခဲ့တဲ့ ကိုရင်ဝတ်မယ့်နေ့မတိုင်ခင် အိပ်မပျော်ရတဲ့နွေည ဆိုတာ ယနေညစစ်စစ်ပေါ့ခမျာ…
ကောင်လေးဟာ အရင်အရင်ညတွေမှာ အရသာသိခဲ့တဲ့အတွက် ဒီိနေ့အတွက် ရသလောက်အစီအစဉ်တွေဆွဲလို့ပေါ့…
ဒါပေမယ့်လေ သိပ်ပြီးလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့မရပါဘူး….ပြင်ထားဆင်ထားရင် ထင်ထားသလိုမဖြစ်ပဲ လွဲချော်တတ်လွန်းလို့ အခြေအနေအပေါ်မီးစင်ကြည့်မယ်လို့လဲတေးထားပါတယ်….
ကောင်လေး ဥာဏ်မီသလောက် ရသလောက် လုပ်နိုင်တာကိုတော့ လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်….
မမစိမ်းရဲ့ ဂွမ်းကတ်ကြီးကို ကောင်လေး ရေတွေလောင်းချပစ်လိုက်ပါတယ်…မတော်တဆမှောက်သလိုမျိုးပေါ့…
ဟုတ်တယ်……ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး….မမစိမ်းက လည်းတမျိူး …ဒီလောက်ပူတဲ့နွေရာသီကြီးတောင် ဂွမ်းကတ်ကြီးက ခြုံရသေး….သူခြုံတာကအရေးမကြီးဘူး…အဲဒီဂွမ်းကတ်ကြီးပါနေတာ ကောင်လေးအတွက်သိပ်ခက်ပါတယ်…
မမစိမ်း သူ့ဂွမ်းကတ်ကြီးမလိုက်တော့ စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတယ်….. …ဘာတွေမှောက်ကျကုန်တာလဲမသိဘူး ဆိုပြီး ပွစိရေရွတ်ရင်း တခြားခြုံစရာစောင်လိုက်ရှာပါတယ်…
ဟီးဟီး….ဥာဏ်ကြီးရှင် ငါကွ…ခွိ…မမစိမ်း စောင်ပါးအပေါ့လေးတစ်ထည်ယူလာပါတယ်…
ကောင်လေးမြင်ကတဲက အိုကေ ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်…စောင်ပါးလေးဆို အိပ်ရင်းနဲ့ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ ပေါ်တတ်ပါတယ်…ဂွမ်းကတ်ထူရင် လေးတော့ အထဲမှာပေါ်နေလည်း အပြင်မထွက်ပဲ မြေအောက်ရတနာဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်ပါတယ်…
ကောင်လေး ဒီညလည်း မမစိမ်းသိုးနေအောင် အိပ်တဲ့အထိ စောင့်နေပါတယ်…မုဆိုးကောင်းတို့၏ သားကောင်ကိုစောငဆိုင်းရာဠ် အားထုတ်အံ့သော ဇွဲလုံ့လဝီရိယ ကဲ့သို့ မမစိမ်းအိပ်ပျော်တဲ့အထိ ကောင်လေး ပေကတ်ပြီး စောင့်နေခဲ့ပါတယ်…
အမှောင်သည် စိတ်ကွယ်ရာကို ဖြစ်စေတတ်ပါသလား..
ကောင်လေး ခနငိုက်သွားသလိ်ုဖြစ်ပြီး အလန့်တကြားပြန်ထလိုက်တော့ မမစိမ်းအိပ်နေတဲ့ပုံစံ တမျိုးပြောင်းနေပါတယ်…
စောင်မရှိတော့ပါဘူး…ခြေရင်းစပ်မှာ စောင်လုံးထွေးလေးပုံနေတယ်ဗျ….စောင်ကပေါ့နေတော့ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်မှာ လျောသွားတယ်ထင်ပါတယ်…ဒါမှန်းသိ အရင်ညတွေထဲက စောင်ကို ရေမှောက်ချထားပါတယ်….တောက်…
မမစိမ်း ဒူးခေါင်းတစ်ဖက်ထောင်ပြီး နောက်ခြေတစ်ဖက်စင်း အနေအထားနဲ့ အိပ်နေပါတယ်
နောင်မှာ ကျနော်တို့တွေနောက်နေတဲ့ ဘန်းစကားလေး “အနေအထားကတော့ ရွှေဖား” ပေါ့ဗျာ..
ကောင်လေးနည်းနည်းတော့အုန်းစားသွားပါတယ်….ဘယ်လိုထိရမလဲ….အရင်လိုမလွယ်တော့ပါဘူး…..အရင်ကဘေးချင်းကပ် စောင်ထဲလက်ကလေးရှို…ဟိုထိဒီထိ …ခုကျ ကားကားကြီးအိပ်နေတာ လက်သွားဝင်ရင် ကိုယ့်လက်က ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်နေမှာ..ပြီးတော့ မီးကလည်းပျက်နေသေး…ချွေးတောင်ပြန်ချင်လာတယ်…..စဉ်းစားရင်း အာခြောက်ချင်သလိုလို ရှုးရှုးပေါက်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ ကောင်လေးထပြီး ရှူရှူ သွားနှပ်ပါတယ်…ပြန်လာတော့ မမစိမ်းကို ကြည့်လိုက်တာ မှောင်မှောင်မည်းမည်းထဲမှာ ဒူးထောင်ဘာထောင်နဲ့…..
ယေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး….သိပြီ…ကောင်လေး ခေါင်းထဲမှာ ကာတွန်းထဲက မီးလုံးလေးလင်းသွားသလို ဥာဏ်အလင်းပွင့်သွားတယ်…မထိရဲလို့ မထိရပေမယ့် ကြည့်လို့ရတယ်လေ..တောက်…အစက ဘာလို့မတွေးမိပါလိမ့်….
ကောင်လေး လက်ထဲမှာ အဲဒီခေတ်တုန်းက ခေတ်စားတဲ့. Emergency Lamp လေးရှိပါတယ်…ခေါင်းကိုချိုးလို့ရတယ်….ပြီးတော့ အောက်မှာ မီးချောင်းတိုလေး ၂ ချောင်းလဲပါတယ်လေ…သိကြတယ်ဟုတ်….အဲဒါလေးကို ဖွင့်ပြီး မီးကစားလိုက်တယ်…မမစိမ်းအိပ်နေတာ ဒူးထောင်သလိုလို ကားသလိုလိုနဲ့ဆိုတော့ ထမိန်က ဒူးစပ်ကျော်ကျော်လောက်မှာတစ်ဖက် နောက်တစ်ဖက်က ဒူးခေါင်းလောက်ပါပဲ… မမစိမ်း ထမိန်းကြီးကလည်း အမိုးတစ်ဝက်ဖွင့်ထားတဲ့ ရုံကြီးနဲ့တူပါတယ် ….
သေချာတာကတော့ မြင်ရတာပါပဲ….မြင်ရတယ်ဗျာ….ကောင်လေး မီးကို ဒီလိုကစားတယ်…အစက အမ်မာဂျန်စီလိုက်ကို အပေါ်မီးခေါင်းနဲု့ခြေရင်းလောက်မှာစထိးိုပြီး (နောင်မှာစာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့မုဆိုးများ မီးထိုးသလို) တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်ဗျ…တွေ့ပါပြီဗျာ..ဗဟိုဌာနချုပ်ကို …ကောင်လေးလန့်သွားပါတယ်…အဘွားပြောပြောနေတဲ့ “ပါပူး” ဆိုတာဒါပါလား…ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့လိုက်ရပါပြီ…လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားစွာနဲ့ မြင်ရတွေ့ရကြည့်ရတာပါ….ကောင်လေးမီးကိုပြောင်းပါတယ်…အပေါ်မီးခေါင်းလေးက narrow beam လိ်ုဖြစ်နေတော့ မျက်စိစူးသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ မမစိမ်းနိုးသွားမှာ စိုးလို့ အောက်က မီးချောင်းတွေကိုပြောင်းဖွင့်ပါတယ်….မီးချောင်းက မျက်စိအေးတယ်လေ….
ကောင်လေး သူကြည့်နေတဲ့အနေအထားကို ဒီလိုပြင်ထားပါတယ်….မမစိမ်း မီးရောင်ကြောင့်လန့်နိုးလာရင် ကောင်လေး ခြင်ထောင်မပြီး ခြင်ထောက်ထဲဝင်ခါစ ပုံလိုမျိုး ခပ်ငုံ့ငုံ့ ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားပေါ့….
မကြောက်တော့ပါဘူး….စိမ်ပြေနပြေကို ကြည့်နေပါတော့တယ်…..ကောင်လေး မိန်းမပါပူးကို ဒီလို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပါ…..မိန်းမပါပူးကို ကောင်လေး ငါးတန်းလောက်စပြီး ကြည့်ဖူးတဲ့ ဘလူးပစ်ချာတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်….ပြီးတော့ …သူ့အိမ်က ယာဉ်မောင်းအကိုကြီးယူယူလာတဲ့ ရောင်စုံစာအုပ်တွေထဲမှာလည်း များကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်…. သူ့ဘကြီး အိမ်သာထဲက ဗီရိုလေးထဲမှာထားတဲ့ နိုင်ငံခြားမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်…ကောင်လေးအတွေးထဲမှာ မတူကွဲပြားခြင်းတွေရဲ့ ပဟေဋ္ဌိပေါင်းများစွာဖြစ်ရပါတယ်…..မိန်းမတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူဘူးဆိုတာ နောင်မှသိလာရပါတယ်…လူတောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်နှာမျိုးမျိုး . ကြောင်လိုတိရစ္ဆန်တွေမှာလည်း အမွှေးအရောင်မတူအမျိုးမျိုး.. ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ရှုပ်နေတာပဲ…ဟင်း………………..သက်ပြင်းတွေချ…တခြားဘာမှမတွေးတော့ပဲ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့က မမစိမ်းရဲ့ ပါပူးနုအိလေးကိုသာ အခွင့်အရေးရတုန်း မက်မက်မောမော အလွတ်ကျက်သလိုကြည့်နေလိုက်တော့တယ်….
ဒီနေရာမှာ မမစိမ်းအဖုတ်အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက်တော့နားထောင်ပေးပါ သယ်ရင်းတို့ရာ….
မမစိမ်းရဲ့ ပစ္စည်းလေးဟာ ကောင်လေးထင်ထားတာထက်ကို သေးနေပါတယ်..အသက်အစိတ်လောက်ရှိနေတဲ့ အပျိုမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖုတ်လေးဟာ ဘာလို့ နည်းနည်းသေးနေရပါလိမ့်… မမစိမ်းဟာ အသားညိုစိမ့်စိမ့်ပါ…..ဒါပေမယ့် ကောင်လေးထင်ထားသလို အဖုတ်ဟာ မဲသဲမနေပါဘူး…မမစိမ်းရဲ့ ပင်ကိုယ်အသားညိုစိမ့်စိမ့်ထက် ပိုပြီး နုတဲ့ အညိုရောင်ကို ဝင်းနေပါတယ်…ဆရာသမားများပြောသလို နေမထိလေမထိ ဆိုသလိုကြောင့်များလား….ကောင်လေး အရင်ညများက စမ်းထားတဲ့ ဆီးခုံမို့မို့ကိုလည်း ကောင်းကောင်းတွေ့ရပါတယ်…ဖူးအုပြီး ဖောင်းကြွနေပါတယ်…မွှေးညင်းတိုတိုလေးတွေနဲ့ ပြီတော့ ထူပိန်းမနေပါဘူး…ကောင်လေး ရင်တွေတုန်နေတာ တလှပ်လှပ်ပါပဲ..အပြင်မှာ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီး တွေ့ရတာ ဘာစာအုပ် ဘာရုပ်ရှင်မှာ ကြည့်ရတာနဲ့ယှဉ်ရင် လားလားမှ မတူပါဗျာ…
မမစိမ်းအဖုတ်မှာ နှုတ်ခမ်းအဖတ်ကြီးတွေကလည်း မထူမပါးနဲ့ ဖောင်းခုံခုံလေးပါ…တစ်ချို့ကအဖတ်ကြီးကြတယ်လေ…နောက်တော့ နှုတ်ခမ်းအဖတ်အသေး…သူလည်းမဆိုးရှာဘူး ပါးပါးလှပ်လှပ်လေးနဲ့….ကောင်လေးကြည့်ရတဲ့ အပြာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆို တချို့မိန်းမကြီးတွေရဲ့ အဖတ်တွေဟာ ဗတ်လဘိုင်လိုက်နေပါတယ်….ပြဲအာနေပါတယ်…
မမစိမ်းရဲ့ ဟဝှာကတော့ အော် စစ်စစ်ပါပဲ…မမစိမ်းကို ကောင်လေးမိသားစု စသိခဲ့တဲ့အချိန်ကနေ ခု ကောင်လေး အချစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဒီတိုနေတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိ ရည်းစားတောင်မရှိဖူးတဲ့ ရှားပါးရိုးသား မမစိမ်းပါ ခများ…
နောက်တစ်ခုက မမစိမ်းရဲ့ အစိသေးသေး…..အဲဒါလေးကိုလည်း ကောင်လေးသေချာလေ့လာကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်…..ကောင်လေးကတော့ အဲဒါကို “အာရုခံဘု” ဆိုပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နာမည်ပေးလိုက်တယ်….တော်တော်တော့နုမှာပဲနော်…..အဲဒါလေးဟာ မိန်းမတွေရဲ့ ဒုတိယမြောက် အထွတ်အထိပ်ဆိုတာ နောင်မှာသိခဲ့ရပါတယ်…..နောက်တစ်နေရာကတော့ မမစိမ်းရဲ့ အပေါက်ထဲကိုပါပဲ…..တစ်နေ့လုံးပင်ပန်းလို့ ခြေပစ်လက်ပစ်အိပ်မောကျနေတဲ့ မမစိမ်းရဲ့ အတွင်းပေါက်ထဲမှာ ကောင်လေးမြင်တာကတော့ အသားနုလိုလို ဘာလိုလို…..ကောင်လေးစိတ်ကူးထဲမှာတော့ မမစိမ်းအတွင်းသားတွေဟာ နီရဲနေမှာ…….
ခုမှာတော့ ပန်းရောင်နုနုလိုပါပဲလား ..ဟုတ်ပါတယ်..မမစိမ်းအတွင်းသားတွေဟာ ပန်းရောင်နုပါတယ်…..
နေကြာစေ့ကို သေချာကြည့်ခဲ့ပြီး ကောင်လေးခဏလှဲချလိုက်ပါတယ်…..ညောင်းလည်းညောင်း ကြာလည်းကြာသွားပြီကော…….
ကောင်လေး စိတ်ရောလူရော အနားယူပါတယ်…ခေါင်းထဲမှာလည်း ပုရစ်အောင်သံတွေလို ဆူညံနေပါတယ်…နောက်…ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒုံးခနဲမြည်အောင်ချလိုက်တယ်….သေချာတယ်..ဒီနေ့ ဒီအခွင့်အရေး နောက်ထပ်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူး……ကောင်လေး မမစိမ်းရဲ့ အသားစစ်စစ်ကို ဒီအတိုင်း ကိုင်ကြည်မယ်…ရအောင်ကိုင်တော့မယ်…..
ရမ္မက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်သတ္တိများ …တွေဝေဖို့တောင် မစဉ်းစားတော့ပါဘူး….ကောင်လေး ခုအရွယ်မှာသာဆိုရင် မမစိမ်းကို နောက်ဆုံးအထိလုပ်မိမယ်ထင်ပါတယ်….အဲဒီတုန်းကတော့ ကောင်လေးရဲ့ မွေးရာပါ ဖွားဘက်တော်ဟာ ဒေါသအမျက်မာန်ထနေတဲ့ နဂါးတစ်ကောင်လို ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ---------------------------------…..
ကောင်လေးအနေအထားပြင်ပါတယ်…မမစိမ်းက ကောင်လေးရဲ့ ညာဘက်မှာအိပ်ပါတယ်….ဒါကြောင့် မမစိမ်းရဲ့ ဗိုက်နေရာလောက်ကို ကောင်လေးအောက်ဆင်းပြီးတစ်စောင်းလှည့်အိပ်ပါတယ်….သူနိုးလာရင် ကောင်လေးအိမ်သာထသွားမလို့ ထတဲ့ပုံစံဖြစ်နေအောင် အသင့်ပြင်ထားပါတယ်..
ကောင်လေး ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ မမစိမ်းထမိန် ရုံအောက်ထဲကို ဝင်သွားပါတယ်…ကလေးစိတ်ကလည်း မပျောက်ချင်သေးပါဘူး….ထမိန်အောက်ထဲဝင်သွားတဲ့လက်ဟာ ကောင်းကောင်းမသွားပဲနဲ့ လက်ညှိုးလက်ခလယ်ကို လမ်းလျှောက်သလို ဆော့သွားလိုက်သေးတယ်…..ဟဟ……မမစိမ်းရဲ့ ပေါင်ခြံဂွကြားရှေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လမ်းဆုံးလို့ ရွာတွေ့သလို လက်ကလေးနှစ်ချောင်းရပ်သွားပါတော့တယ်….
ရင်တွေခုန်နေတာ တဒိန်းဒိန်းပါပဲ…ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သိပါတယ်….ရင်ထဲမှာ ဘင်သံလိုလို ဘာလိုလို ပွဲတော်လှည့်နေပါတယ်….
ကောင်လေး လက်အားလုံးကိုစုပြီး မမစိမ်းရဲ့ဆီးခုံကစလို့ အဂါင်္ဇာတ်တစ်ခုလုံးကို ခြုံပြီးအုပ်ဖိထားလိုက်ပါတယ်….ကိုင်လိုက်ပါတယ်…
အရင်တုန်းက ထမိန်ပေါ်ကနေကိုင်တာ ခုအသားကိုတိုက်ရိုက်အကာအကွယ်မပါတာနဲ့ တခြားဆီပါပဲ…သိပ်ကိုင်လို့ကောင်းပါတယ်…
ပြီးတော့ ကောင်လေး လက်ခလှယ်နဲ့ မမစိမ်းအပေါက်ကို အပေါ်ကနေအောက်တစ်လျှောက် ရမ်းသရူး ဆွဲလိုက်ပါတယ်…အပ်ပင်ဒေါင်း ပေါ့နော်….အရင်အမွှေးနုလေးတွေကိုလည်း သေချာအောင်ထပ်စမ်းပါတယ်….အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရရင် ကလေးရဲ့ဂျိုင်းနဲ့ နုတာချင်းတူပါတယ်…
ခုနတုန်းကမြင်ထားရတဲ့ အာရုံခံဘု(အစိ) ကိုလည်းထိကြည့်ပါတယ်…တကယ်ကတော့ စိတ်ထဲကနေ ညှစ်ချင်တာပါ…..မမစိမ်းအစိကို ညှစ်ချင်ပါတယ်…ချေချင်ပါတယ်….ဒါပေမယ့်လေ ကောင်လေးထိပွတ်ရုံလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ….
နောက် ဖိုင်နယ်အဆင့်ကတော့ ကောင်လေးလက်ခလယ်ကို မမစိမ်းအပေါက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်….ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဝင်ပါတယ်…လက်သည်းခွံဝင်ရုံလောက်ကနေစပြီး လက်တစ်ဆစ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း လက်ခလယ်တစ်ချောင်းလုံးဝင်ပါတယ်…..
မမစိမ်းအဖုတ်အပေါက်ထဲကို ကောင်လေး လက်ခလယ်တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်လေးဘာမှဆက်မလုပ်သေးပဲ ဝင်လက်စလက်ခလယ်ကိုစိမ်ထားပါတယ်…အရသာခံပါတယ်…..ငယ်ပါမဟုတ်ပဲ လက်တောင်ဒီလောက်အရသာရှိပါတယ်….အဝှာသာဆိုရင် ဘယ်လိုနေလိမ့်မလဲ ..လောကီကိစ္စ ဇိမ်ခံရာမှာ အသိမ်မွေ့ဆုံးသော အရသာဆိုတာ လက်ထည့်ရုံလောက်နဲ့ကို သိသွားပါပြီ….
ပြီးတော့ ကောင်လေးလက်ခလယ်ကို ရွရွလေးပြန်ထုတ်တယ်…..ပြီးတော့ ကောင်လေးပြန်ထည့်တယ်….မိုက်တယ်ဗျာ….တကယ်ဖီးလင်ပါ….
အဲလို မမစိမ်းအပေါက်ထဲ လက်ခယ်သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတာ အကြိမ်အရေအတွက်တော့မမှတ်မိတော့ပါ…..မမစိမ်းပစ္စည်းထဲမှာ စိုလာပါတယ်….
အဲလိုစိုလာတော့ ခုန မမစိမ်းအဖုတ်ကို ကောင်လေးနှိုက်နေတာ ပိုလို့ချောလာပါတယ်…
ကောင်လေးရက်စက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး….မမစိမ်းအဖုတ်ထဲမှာ စိုစိစိဖြစ်လာတယ် ချွဲတဲတဲဖြစ်လာတယ် ဆိုတာနဲ့ ကောင်လေးနှိုက်နေတဲ့ လက်ခလယ်ကို နောက်စစ်ကူထပ်ပို့လိုက်ပါတယ်…စစ်ကုကတော့ လက်ညှိုးပါ…
လက်ညှိုးလက်ခလယ် ပူးတွဲဝင်ပါတယ်…ထူးဆန်းတာက ဆန့်ပါတယ်….လက်သူကြွယ်တော့ မထည့်တော့ပါဘူး…တော်လောက်ပါပြီလေ လက်နှစ်ချောင်းဆိုရင် ..
နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာက အဲ့အချိန်ထိ မမစိမ်းမနိုးပါဘူး…တုပ်တုပ်တောင်မလှုပ်ပါဘူး….အသက်ရှုသံလည်း ပုံမှန်ပါပဲ…
ကောင်လေးတစ်ယောက်သာ ဟတ်ဘိတွေရိုက်လို့ပေါ့….ကောင်လေးတစ်ကယ်ခံစားပါတယ်….မမစိမ်းအဖုတ်ကို ကောင်လေးလက်နဲ့နှိုက်ပြီး စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကိုယ်တိုင်မှီဝဲသလို ပုံဖော်ပါတယ်…
တော်တော်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်…မမှတ်မိတော့ပါဘူး……မမစိမ်းအဖုတ်ကို ကောင်လေးလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ကျေနပ်တဲ့အထိ နှိုက်ခဲ့ပြီး ကောင်လေးကိုယ်တိုင် စိတ်အဆာပြေမှ ရပ်လိုက်ပါတော့တယ်…..
ပြီးတော့ ရေချိုးခန်းသွားပါတယ်…..လက်ကို ထောင်ပြီးသွားတာပါ…..ကောင်လေး မီးအိမ်အောက်မှာ ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေကို ကိုယ်သေချာကြည့်ပါတယ်…..မမစိမ်းထဲက အရည်တွေစိုနေတယ်လေ…..အဖြူကျဲကျဲလို နို့မှုန့်ကျဲကျဲနဲ့ဖျော်တဲ့ ရေလို ..အဖြူရောင် နောက်နောက်ကျဲကျဲလေးပါ….ကြည်တော့မကြည်နေပါဘူး…..
လူ့သဘာဝနမ်းကြည့်လိုက်တယ်……ကောင်လေးနဂိုဗီဇက ရွံတတ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် အဲဒီမမစိမ်းအနံ့က မနံပါဘူး…ရွံစရာလည်းမကောင်းပါဘူး…..ဒါပေမယ့် မွှေးလည်းမမွှေးပါဘူး…ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာ ပြောရခက်ကြီးပါပဲ…
ကောင်လေးဆက်မအိပ်တော့ပဲ နောက်နေ့မနက်ထိ စဉ်းစားရင်းမိုးလင်းခဲ့ပါတယ်…နောက်နေ့ သာမဏေဝတ်ပါတယ်…ခက်တာက ကိုရင်ဘဝမှာ အဲဒါကြီးကိုပဲ မျက်စိထဲမှာမြင်နေပါတယ်….ဘုရားရှိခိုးရင်တောင် အဲဒါကြီးပေါ်လာလို့ မနည်းဖျောက်နေရပါတယ်…..အဖျက်ဆိုတာ အဲဒါပါပဲ…..ဒါပေမယ့် ကောင်းတယ်…အဟိ…
ဒီကိစ္စမှာ ကောင်လေးခု အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ အဖြေရှာမရခဲ့ပါဘူး….ဝေခွဲလို့လဲမရသေးပါဘူး…..ကောင်လေးဒီလိုနှိုက်ခဲ့တာ ဒီလောက်နှိုက်ခဲ့တာ မမစိမ်းမသိဘူးလား….တကယ်အိပ်နေလား….အိပ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်နေတာလား…
ဒါမှမဟုတ် သိရဲ့သားနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့တာလား….ကလေးမှလို့ ဘာမှလည်းမဖြစ်နိုင်လို့ လွှတ်ပေးလိုက်တာလား….သူကိုယ်တိုင်ရှက်နေလို့ မပြောရဲလို့လား….ကောင်းလို့ငြိမ်နေတာလား……လားပေါင်းများစွာနဲ့ ကျနော်မသိခြင်းများပဲခမျာ…..
ကောင်လေးဟာ ခုချိန်ထိ စိတ်လိုလက်ရရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် သူ့ထက်ပိုကျားကျတဲ့ အကိုကြီးတွေ ဘီးဂျဲတွေနဲ့ စကားစပ်မိတိုင်း အဲဒီအကြောင်း်လေးပြောပြပြီးမေးနေတတ်ပါတယ်…အကိုကြီးတွေက သေချာနားထောင်ပြီးရင်တော့ “မင်းပြောတာ လီးတောင် တောင်လာပြီ” ဆိုပြီး ကောင်လေးလိုချင်တဲ့အဖြေမရလိုက်ပဲ စကားဝိုင်းပျက်သွားတာပဲ အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့တာ များပါတယ်…
ကဲ..ခု ကောင်လေးရဲ့ ညီကိုနှမသယ်ရင်းများကရော ဒွိဟများစွာနဲ့အဖြေရှာနေဆဲကောင်လေးကို ဘယ်လိုများပြောချင်ပါသလဲခမျာ …
XXXXXXXXXXXXXXXXX ပြီးပါပြီ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Posted by နှာသခင် at 10:48 PM